Chromium Boride Powder, CrB2 - Goodao Technology Co, Ltd.
ngura inodzivirira, kupisa kupisa. Inoshandiswa seye inopfeka-inopesana, anti-hightemperature oxidation yekupfeka uye yenyukireya reactor mune iyo neutron yekumwa yekumhanyisa electrode chinokonzeresa, mafuta sero elekitirodhi elektrode electrode
Molecular fomula Crb2
CAS Nhamba 12006-80-3
Unhu sirivha pfumbu yesimbi upfu
Nzvimbo yakanyunguduka 1300C
Kuwandisa 7.63 g / cm3
Zvishandiso ngura inodzivirira, kupisa kupisa. Inoshandiswa seye inopfeka-inopesana, anti-hightemperature oxidation yekupfeka uye yenyukireya reactor mune iyo neutron yekumisikidza
Chigadzirwa Chigadzirwa: chromium diboride
Iyo molekyulu fomula yechromium diboride: b2cr
Molecular uremu: 73.62
Chirungu Zita: chromium boride (CrB2) EINECS: 234-499-3
Kuwandisa: 5.15 chiChirungu alias: chromium diboride; monochromium diboride
Flash poindi: nzvimbo inonyungudika: 1550oc
Iyo inoshandiswa pakugadzira yakakwira tembiricha yemagetsi conductor uye alloy ceramics.
Chromium diboride (CRB_ 2) Iko kupfeka kune yakanyanya kusungunuka poindi, kukwirira kuomarara, kukwirira kupfeka kuramba uye ngura kuramba. Uye zvakare, ine yakanaka kemikari inertia uye haisi nyore kubatana nesimbi. Sekuvhara kwakasimba, zvinotarisirwa kusangana nezvinodiwa zvekugadzirisa chip. Bepa iri rinonyanya kubva pane yemumba neyekunze CRB_ Kufambira mberi kwekufambira mberi uye kusimudzira kweyekupfeka kwakaomarara kunoiswa paCRB deposition neyakaumbiridzwa PVD tekinoroji_ Kugadzirira, chimiro uye zvivakwa zvekupenda zvakadzidzwa. Mhedzisiro yacho yakakosha kukosha kwesainzi uye kukosha kwekushandisa. Kutanga, CRB yakaiswa nesimba rakakwira pulsed magnetron sputtering (hipims) _
Iko kuumbika, danho dhizaini uye mehendi zvivakwa zvekupfeka zvakaonekwa
Iko kukakavara uye kupfeka maitiro eiyo kupfeka munzvimbo dzakasiyana dzekuyedza (yakaoma kukakavara, yakadonhedzwa mvura uye yegungwa mvura) zvakadzidzwa. Mhedzisiro yacho inoratidza kuti: CRB_ Iko kupfeka kunoratidza (101) maitiro akasarudzika, uye chikuru chikamu chikamu CRB_ Iyo atomiki reshiyo yeB / Cr iri 1.76, kuomarara uye elastic modulus ndeye 26.9 ± 1.0 GPA uye 306.7 ± 6.0 GPA, zvichiteerana. Iyo yekukwikwidzana coefficients yeiyo kupfeka mune yakaoma kukwesana, yakadonhedzwa mvura uye yegungwa ndeye 0.75, 0.26 uye 0.22, zvichiteerana. Ikoji yekukwikwidza kwekukwirisa kwemvura yakacheneswa uye nharaunda yemvura yegungwa yakadzikiswa zvakanyanya nekuda kwemuganho girizi yemvura yakacheneswa uye mvura yegungwa. Iyo yekukwesana uye kupfeka mashandiro eiyo kupfeka mune yakaoma kukakavara uye yakasvibiswa mvura nharaunda inokonzeresa kupfeka, nepo mune yemugungwa nharaunda, iyo kukweshesana coefficient yeiyo kupfeka inoderera pachena, Ndiyo synergistic mhedzisiro yekukanganisa kupfeka uye hasha kusakara.
Kechipiri, sekuenzanisa nemahipim, iyo CRB inowanikwa neDC magnetron ichispurita nekugadzirisa chinongedzo chepasi_Iyero yeatomiki yeB / Cr inosiyana kubva pa1.9 kusvika ku2.0 pamwe neshanduko yekupisa tembiricha. Mhedzisiro yeXPS inoratidza kuti kupfeka kuchiri kunyanya kuumbwa neCRB_ Mhedzisiro inoratidza kuti hukasha hwekupfeka idiki uye iyo RQ iri pakati
1.11 nm uye 1.95 nm. Nekuwedzera kwetembiricha yekuisa, kugona kwekuparadzira kwemaatomu akashambadzirwa pane iyo substrate pamusoro kunosimudzirwa, uye iko kubwinya kwekupfeka kunowedzera zvishoma nezvishoma, uye chimiro chekristaro chinoshanduka kubva pakuvhenganiswa kwe (101) uye (001) kusvika (001) kutariswa kunodiwa; muchinjikwa-chikamu morphology yekushongedza inoshanduka kubva kune yakasviba fibrous chimiro kusvika kune coarse columnar mamiriro (anenge 50 nm muhupamhi),
Chekupedzisira, yakashanduka ikaita dense nano columnar mamiriro (anenge 4 ~ 7 nm dhayamita).
Nekuwedzera kwekutsvaira kwekutsvaira, iyo michina maficha eiyo kupfeka anovandudzwa pachena. Kana iyo tembiricha yekumisikidza yakakwira kupfuura 300 ℃, superbard CRB ine hurema hwakakura kupfuura 40 GPA inogona kuwanikwa_Kana iyo tembiricha yekumisikidza iri 400 ℃, kuomarara kwekupfeka kunosvika 50.7 ± 2 GPa. Iko kushanduka kweiyo microstructure uye zvemagetsi zvimiro zvine tembiricha ye deposition inonzi kune iyo (001) yakasarudzika kutarisisa uye densification yeiyo microstructure nekuda kwekusimudzira kuwanda kwema deposition maatomu. Chekupedzisira, maCRB ane (101) uye (001) madireti akasarudzika anodzidziswawo _ Kugadzikana kwemafuta kwekupfekedza kwakaedzwa, uye CRB substrate neCRB pakasiyana tembiricha yekuisa yakaedzwa_Magetsi ekutanga emagetsi ekuputira maviri mu3.5 wt.%
Mhinduro yeNaCl yakaongororwa. Mhedzisiro yacho inoratidza kuti: (101) ratidziro yeCRB_ Chikamu chitsva chakaumbwa pa1000 ℃, uye (001) chinongedzo cheCRB_ Mhedzisiro inoratidza kuti (101) - yakatarisana neCCRB yekuratidzira inoratidza yakakwira yakanyanya tembiricha kugadzikana nekuda kwe ( 101) inofarira kutariswa kweCRB_ Mhedzisiro inoratidza kuti iyo CRB yekupfeka ine yakakwira nzvimbo simba uye lattice simba rekukanganisa kupfuura CRB_ Iyo ngura ingangoita yecb-2 yekupfeka yaive yakakwira kupfuura iyo ye cemented carbide, asi iyo corrosion yazvino density yakadzikira neanenge maviri maodha e kukura-2 kupfeka kunogona kunyatso chengetedza yakaomeswa carbide.
Pashure: Titanium Boride Upfu, TiB2
Zvadaro: Iron Simbi, FeB
Chromium boride upfu
Chromium boride upfu Mafekitori
Chromium boride upfu Fekitori
Chromium boride poda Mugadziri
Chromium boride poda Vagadziri
Chromium boride poda Mutengo